Signiant ကမူပိုင်ခွင့်ကိုဆိုင်းငံ့ထားသည့်အသိဥာဏ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Signiant မူပိုင်ခွင့်-ဆိုင်းငံ့ထား Intelligent ပို့ဆောင်ရေးမိတ်ဆက်
Signiant မူပိုင်ခွင့်-ဆိုင်းငံ့ထား Intelligent ပို့ဆောင်ရေးမိတ်ဆက်
NAB 2019 မှာ, Signiant Inc မှအသိဉာဏ်ဖိုင်လွှဲပြောင်းအတွက်ရှည်လျားသောအချိန်ခေါင်းဆောင်၎င်း၏အသစ်ကမူပိုင်ခွင့်-ဆိုင်းငံ့အသိဉာဏ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဗိသုကာမိတ်ဆက်သည်။ အဆိုပါဗိသုကာတစ်ဦးတည်းပိုင် UDP ကို-based အရှိန် protocol ကိုအတူစံသည် TCP အစားထိုးသို့မဟုတ်အလိုအလြောကျကွန်ယက်ကိုအခြေအနေများပေါ် မူတည်. အပြိုင်အတွက်မျိုးစုံ TCP connections ကိုလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါနည်းပညာယင်ကောင်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်များစေရန်သင်ယူခြင်းစက် leverages တဲ့မူပိုင်ခွင့်-ဆိုင်းငံ့ယန္တရားအသုံးချဖို့ကွန်ယက်မှတဆင့်ဒေတာရဖို့အမြန်ဆုံးလမ်းဆုံးဖြတ်သည်။ အဆိုပါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး site ကို-to-site ကိုလွှဲပြောင်းအဖြစ်မိုဃ်းတိမ်နှင့်ထံမှလွှဲပြောင်းနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအမျိုးစုံ Gbps speed transfer နှုန်းနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်ဗိသုကာပြီးသား Signiant ၏ cloud-ဇာတိ SaaS ထုတ်ကုန်နှစ်ခုအတွက်ချထားသည်:
လေယာဉ်ခရီးစဉ် မိုဃ်းတိမ်နှင့်ထံမှဖိုင်လွှဲပြောင်း accelerates ရာ
ဂျက် ရိုးရှင်းမြန်ဆန်, အလိုအလျောက်စနစ်က-to-system ကိုဖိုင်လွှဲပြောင်းဘို့
"ကွန်ရက်များတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနှင့် bandwidth ကိုတိုးပွါးသည့်အတိုင်းများစွာသောမှားယွင်းစွာပြုလုပ်အရှိန်နည်းပညာမရှိတော့လိုအပ်ပါသည်ယူဆ," Signiant CTO, မှ Ian Hamilton ကပြောခဲ့သည်။ "ကွန်ယက် bandwidth ကိုနှင့်ကွန်ယက် throughput အတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်နှင့် Signiant ပိုမိုမြင့်မား bandwidth ကိုဆက်သွယ်မှုအပေါ် ပို. ပင်တန်ဖိုးကိုပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောအသိဉာဏ်ဗိသုကာ To-site ကို site ကို-site ကို-to-သည်မိုဃ်းတိမ်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးဖိုင်များကို cloud-To-မိုဃ်းတိမ်ကိုလွှဲပြောင်းအပါအဝင်လွှဲပြောင်းအမျိုးအစားအားလုံးကိုထောက်ခံပါတယ်နှင့်ဖိုင်အရွယ်အစားသို့မဟုတ်အမျိုးအစားပေါ်အဘယ်သူမျှမသတ်နှင့်အတူစီး။ "
နယူးဗိသုကာသြဇာစက်ရီးရဲလ်-အချိန်အတွက်ကွန်ယက်အခြေအနေများမှ Adapt ဖို့သင်ယူခြင်း။
ရရှိနိုင် bandwidth ကိုအပြည့်အဝအားသာချက်ယူနိုင်ရန်အတွက်, Signiant ရဲ့စက်သင်ယူမှု algorithm ကိုအတိတ်သမိုင်းကို examine နှင့်အကောင်းဆုံးဖိုင်-based နှင့်တိုက်ရိုက်မီဒီယာလွှဲပြောင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်လျှောက်လွှာနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-Level လွှဲပြောင်း parameters များကိုစီစဉ်ပေးသည်။ ဒီစျေးကြီးနဲ့အမှားကျရောက်နေတဲ့လက်စွဲစာအုပ် tuning လက်ဆောင်မရှိဘဲအကောင်းဆုံးရလဒ်သေချာပေမယ့် system ကိုသိသှားအဖြစ်ရလဒ်များကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးတက်စေပါဘူးမသာ။ Signiant ရဲ့မူပိုင်-ဆိုင်းငံ့အသိဉာဏ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပြင်, Signiant ရဲ့ core UDP ကို-အရှိန် protocol ကိုကွဲပြားအားသာချက်များကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ Signiant အောင်းနေချိန်နှင့် packet ကိုဆုံးရှုံးမှုမှာရှာဖွေနေအသုံးပြုပုံနှင့်လည်းအဆက်မပြတ်ယင်းတွေ့ရှိချက်များတွင်ပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုဆန်းစစ်နေဖြင့်ပိတ်ဆို့မှုကို၏ကွဲပြားခြားနားသောသတင်းရင်းမြစ်အထီးကျန်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင့်အစွန်းနှင့်အဓိကကွန်ယက်ကိုကြောပိတ်ဆို့မှုကိုအကြားခွဲခြားနှငျ့အညီတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။
Hamilton ကဆက်ပြောသည်: "Acceleration ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုထုတ်ကုန်အသစ်ထောက်လှမ်းရေးနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-တန်းစွမ်းရည်ဖြည့်စွက်, ငါတို့အစာရှောင်ဖိုင်လွှဲပြောင်းကျော်လွန်ရွှေ့ပင်အဖြစ် Signiant မှအခြေခံနေဆဲဖြစ်သည်။ networks တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာအားလုံးအခြေအနေများအောက်တွင်ရှေ့ဆက်စျေးကွက်၏ဖြစ်နေဆဲသေချာစေရန်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှကျူးလွန်နေကြတယ်။ "
မိုဃ်းတိမ်ကို ဖိုင်လွှဲပြောင်း လေယာဉ်ခရီးစဉ် ဂျက် Signiant က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-03-21
ယခင်: Virgo ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအုပ်စု Bitcentral အတွက် $ 10 သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြေညာ
နောက်တစ်ခု: NAB 2019 မှာအသစ်နှင့်တိုးတက်လာသောမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာကိုတင်ဆက်ဖို့ Primestream